Sakafo tsara ny hafanana sarimihetsika China Manufacturer
Description:Fiafaran'ny sarimihetsika fanasan-tongotra,Indoor Dampas Sauna Heat Film,Golden Wave Sauna Heat Film
Home > Products > Fanamboarana fitaovana fanamafisana > Infraroka Sauna Heat Film > Sakafo tsara ny hafanana sarimihetsika
1Soft --------- Mahafaly kokoa anao ny mifaly
2Tanjaka ------ Mety tsara ny andro iainana. Toy ny fandroana amin'ny masoandro izany.
3Health ------ Manana fihetseham-po tsara ianao ary manana ny endriny lavitra be.
4Safe --------- Fiarovana mahery vaika izany.
5Cheap ------- Ilaina ny vidiny.
6Simple to move ------ Mora ny manadio sy mampitony.
7Variety --------- Manana habe sy karazany maro izahay.
Fanamafisana voalohany: 240-265Ω, fanamafisana standard 252Ω (soliderana plasma volafotsy ao anatin'ny 3.5Ω)
Hery: 210W ± 5%
Fiafaran'ny sarimihetsika fanasan-tongotra Indoor Dampas Sauna Heat Film Golden Wave Sauna Heat Film Ny kalitao tsara ho an'ny sarimihetsika hafahafa Fitrandrahana sarimihetsika karbonika Camera mitazona sarimihetsika hafana hafanana Fitaovana fanasitranana sarimihetsika matevina Fandefasana sarimihetsika mimanda ho an'ny Sauna